fanontaniana Tetikasa Airbus A32x FD-FMC v1.55: tsy misy lisitra SID / STAR amin'ny FMC
1 taona 9 volana lasa izay #814 by CL38
Mametraka ity fanontaniana ity aho satria tsy afaka miala amin'ny olana mandritra ny andro maromaro.
Ny olako: aorian'ny fametrahana ny Project Airbus A32x FD-FMC v1_55 (rindrambaiko alaina avy ao amin'ny library.avisim.net) rehefa amboariko ny fampiharana avy amin'ny P3D_v4 sidina maimaim-poana miaraka amin'ny drafi-panidinana maimaimpoana amin'ny Nice-Côte d'Azur mankany London Heathrow, ary rehefa avy nanamboatra motera tao amin'ny FMC aho dia tsy manana ny lisitry ny SID / STAR ary ny lakolosy FMC dia tsy mandeha.
Voamariko fa ny boky fametrahana ny addon dia manondro fa ity karazana zava-nitranga ity dia tokony ho avy amin'ny fametrahana ratsy XMLTools3D.dll na fanambarana ratsy ao amin'ny DLL.xml saingy tsy hitako ny fahadisoana nataoko tamin'ny fametrahana ahy.
Ny zavatra nataoko:
- hatramin'ny 2 volana izay nialako tao FSX Gold Edition ho P3D v4; Efa nanamboatra ity tetikasa Airbus ity teo aloha aho FSX tsy misy olana ary niasa mahazatra;
- alohan'ny hifindra any P3D I uninstalled FSX sy ny fanampiny fanampiny;
- aorian'ny fametrahana ny P3D Naveriko indray FSX (afa-tsy Acceleration) mba hahitana fiaramanidina voarakitra ao FSX nefa tsy hita P3D, tsy misy olana;
- Nohavaoziko ary nampiasako ny sakan'ny A320 Familly Mega avy ao Rikoooo, tsy misy olana;
- Nalaiko ny Project Airbus A32x v1_55 ary nametrahako azy io taorian'ny fanolorana ny manual (fametrahana manual ho an'ny P3D v4); Hitako ny tsy fitovian-kevitra eo anelanelan'ny boky fametrahana sy ny hazo rindrambaiko
§5: nandika XMLTools3D.dll ho C \_ Programs \_ Lockheed_Martin \_ Prepar3D_v4
§5: Namboariko ny lahatahiry "Modules" ao amin'ny C \_ Programs \_ Lockheed_Martin \_ Prepar3D_v4 izay natoroko ny LoggerX.dll
§7: Ny rakitra FD-FMC_database.kmz dia tsy tao amin'ny folder FD_FMC fa ao amin'ny FD_FMC Doc & Manuals; Nataoko tao amin'ny tahiry FD-FMC aho;
§7: ny rakitra FMC_Path.ini dia tsy hita ao amin'ny v1.55, noho izany dia azoko ny FMC_Path.ini tamin'ny alim-bika v1.0 teo aloha ary dia nadikako tao amin'ny lahatahiry FD_FMC
§8.2: Ny rakitra DLL.xml dia ao amin'ny C \_ ProgramData \_ Lockheed Martin \_ Prepar3D_v4; Ampio ireo fanambarana roa voalaza (XMLTools sy LoggerX); Mifanohitra amin'izay voalaza dia manontany tena aho raha toa ka ao anaty ordinatera maina ity rakitra ity P3D araka ny nambara;
- Ary rehefa nanomboka ny safidiko malalaka aho dia nihaona tamin'ny olana
- Nampiasa ny tetikasa Airbus A32x 1_55 avy amin'ny Project Airbus aho FSX (fametrahana automatique); Nihaona tamin'ireo olana 2 aho mba hahafantarana fa tsy miseho amin'ny ↑ 5 ary tsy misy FMC miaraka amin'ny ↑ 7; izay navotsoko tamin'ny fametrahana FSX haingana; ary avy eo ny sidina Nice> London niaraka tamin'ny SID / STAR dia niasa tsara.
Ao koa ny fanondroana izay mety manan-danja, izany hoe rehefa mampiasa aho FSX Manana hafatra fiarovana aho hanaiky XMLTools.dll ho tahiry azo antoka sy rindrambaiko azo antoka, hafatra fiarovana izay tsy ananako rehefa mampiasa aho P3Dv4.
Raha misy afaka milaza amiko ny fomba hialana amin'io toe-javatra ratsy io P3D v4, tena ho feno fankasitrahana aho.